स्वास्थ्य, महत्वपूर्ण क्षेत्र भएकोले यसलाई सधै उच्च राख्न स्वास्थ्यकर्मीलाई जिसस प्रमुख ढुंगानको आग्रह ! – ebaglung.com
स्वास्थ्य, महत्वपूर्ण क्षेत्र भएकोले यसलाई सधै उच्च राख्न स्वास्थ्यकर्मीलाई जिसस प्रमुख ढुंगानको आग्रह !
२०७६ कार्तिक २२, शुक्रबार २०:१३	Top News, अन्य समाचार, थप समाचार
बागलुङ २०७६ कात्तिक २२ । स्वास्थ्य कार्यालय बागलुङले आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ को जिल्ला स्तरीय बार्षिक प्रगती समिक्षा सम्पन्न गरेको छ । समिक्षामा जिल्लाका दश वटै स्थानिय तहले बर्ष भरी गरेको प्रगती र आगामी दिनको भावी योजना सार्वजनिक गरेका थिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक राजेन्द्र ढुंगानाले स्वास्थ्य क्षेत्र निकै महत्वपुर्ण क्षेत्र भएकोले यसलाई सधै उच्च राख्न स्वास्थ्यकर्मीलाई आग्रह गरे । उनले संघिय संरचना निर्माण भए सँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार हुँदै आएको र यसमा अझै स्थानिय तहले लगानी बढाउनुपर्ने बताए । ढुंगानाले जिल्लाका दुर्गम ग्रामिण भेगका जनताले स्वास्थ्य सेवा लिनका लागि सहज बातावरण सिर्जना गर्न स्थानिय तहले महत्वपुर्ण भुमिका खेलेको बताए ।
कार्यक्रममा जैनिमी नगरपालिकाका नगरप्रमुख ईन्द्रराज पौडेल, बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लुकबहादुर क्षत्री, बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत भिम बहादुर कुँवर बरेङ गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक पदम पुन लगायतले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि सवै तहबाट सहयोगको आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
जिल्लाका स्थानिय तहमा भएको प्रगति विवरण समस्या चुनौति र त्यसको समधान खोज्ने र यस वर्षका कार्यक्रम कसरी संचालनमा ल्याउने समिक्षामा छलफल भएको थियो ।
यस वर्ष समग्र जिल्लाको सुरक्षित मातृत्व, खोप र परिवार नियाजन कार्यक्रममा उल्लेखनिय प्रगती भएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार जिल्लामा क्षयरोगीको संख्या भने बढेको छ । विशेषत जिल्लाको बडिगाड क्षेत्रमा यसको संक्रमण बढदै गएको हुँदा न्युनिकरणका लागि कसरी पहल थाल्ने बारे समिक्षामा छलफल भएको स्वास्थ्य कार्यालय बागलुङका कार्यालय प्रमुख सुरज गुरौले बताए । समिक्षामा सुरक्षित मातृत्व, परिवार नियोजन सेवा, खोप सेवा, क्षयरोग,कुष्ठरोग एचआईभि एड्स लागायतम के कस्तो अवस्था छ सोको बारेमा छलफल गरिएको थियो ।
समिक्षामा जिल्लामा संचालित गैरसहकारी संस्थाहरु फेयर मेड, मेडिक मोबाईल सुआहारा, सुनौलो परिवार लगायतका संस्थाहरुले पनि आफ्ना कार्यक्रमको बारेमा प्रस्तुतिकरण गरेका थिए ।
कार्यक्रम स्वास्थ्य कार्यालय बागलुङका प्रमुख सुरज गुरौको अध्यक्षता र सुचना अधिकारी घनश्याम सापकोटाको संचालनमा सम्पन्न भएको थियो ।
दिनानुदिन मानवअधिकारका घट्नाहरु उन्लङघन हुँदै गएकोमा चिन्ता प्रकट !
त्रिशुली युवा क्लवको क्रियाकलाप प्रदेश मन्त्री बस्नेतव्दारा प्रशंसा ! हिलमा हरिबोधनी एकादशी मेला सम्पन्न : त्रिशुली नदीमा ३६५ हात लामो तोरण तारियो !